Maison Evita kwiziko Sorrento kunye ithala - I-Airbnb
Maison Evita kwiziko Sorrento kunye ithala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSorrento Dreams
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uSorrento Dreams iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-Maison Evita inamagumbi amabini okulala abukekayo kwaye asulungekisiweyo ahlaziywe ngokupheleleyo kwaye anikwe incasa kunye nokhathalelo olunzulu lweenkcukacha.
Ibekwe kumgangatho we-3 (kunye ne-elevator) yesakhiwo esingaphantsi kwemizuzu emi-2 uhamba ukusuka kwisikhululo sikaloliwe kunye nesikwere esikhulu saseSorrento.
Elona candelo lihle kakhulu leMaison Evita lelona gumbi lokuhlala liphangaleleyo neliqaqambileyo elinesofa ezitofotofo, iitafile kunye nezitulo. Indawo yokuhlala ivula ngqo kwi-terrace ixhotyiswe kakuhle ukukunika ithuba lokonwabela indawo engaphandle yendlu. I-terrace ngokwenene yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla emva kohambo oluxakekileyo losuku olujikeleze indawo yaseSorrento.
I-Maison Evita ngaphezu koko yenziwe ngamagumbi amabini okulala, ngalinye line-air conditioning kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwi-terrace ethandekayo yangasese, igumbi lokuhlambela elineshawa, igumbi lokuhlambela lenkonzo kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo apho unokufumana amava okupheka ukutya kwe-Italian.
Inkqubo eyomeleleyo ye-Wi-fi kunye ne-air conditioning inikezelwa.
Kanye embindini weSorrento, ebekwe ngaphantsi kwemizuzu emi-2 uhamba ukusuka kwisikhululo sikaloliwe kunye nesikwere esikhulu seSorrento; Kufutshane nendlu ungafumana iivenkile ezinkulu, iibha, iibhanki, iivenkile, iivenkile zokutyela kunye nazo zonke izinto eziluncedo onokuthi uzifune ukwenza okuninzi kokuhlala kwakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Sorrento Dreams
Abasebenzi bethu baya kufumaneka ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho ukuze bakunike ulwazi malunga nohambo, uhambo ngesikhephe, amava okupheka kunye nokunye okuninzi.